လိုဂိုဒီဇိုင်းစတူဒီယိုအခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
အဆိုပါ Windows ကို operating system ကိုမျက်နှာပြင်၏အရောင်အဝါကိုထိန်းညှိဖို့မဆိုအခက်အခဲမရှိဘဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကမရရှိနိုင်နည်းလမ်းများ၏တဦးတည်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြဿနာများဒီ option ကိုရိုးရှင်းစွာစညျးမဉျြးစညျးကမျးမဟုတ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်, ထိုအမှုအမျိုးမျိုး၌ရှိပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်လက်တော့ပ်ပိုင်ရှင်များမှအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်, ပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
အရောင် Vindovs running လက်ပ်တော့အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှပထမဦးဆုံးအရာ။ စုစုပေါင်းမှာတော့တော်တော်များများ settings အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, သူတို့ကအားလုံးအခြို့သောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အများဆုံးခေတ်သစ် devices တွေကို function ကိုခလုတ်များမှာများ၏ကီးဘုတ်တွင်, အရာ၏အကို Activation clamping ပြုနေသည် Fn + F1 ကို-F12 သို့မဟုတ်အခြားသော့မှတ်သား။ မကြာခဏအရောင်အဝါပေါင်းစပ်မြှားနှင့်အတူပြောင်းလဲပေမယ့်အားလုံးထုတ်လုပ်သူပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဂရုတစိုက်သူမ၏ရန်လိုအပ်သော function ကိုသော့ချက်ကီးဘုတ်ဖတ်ပါ။
အားလုံး discrete နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်ကတ်များရောင်ခြည်အပါအဝင်အများအပြား parameters တွေကို၏ပါးလွှာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုထုတ်လုပ်ပေးသောဆော့ဖ်ဝဲရေးသူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့သော software ကိုမှအကူးအပြောင်းကိုစဉ်းစားပါ "NVIDIA Control Panel ကို":
ညာဘက်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအရပ်ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့် desktop ပေါ်မှာသွားပါ "NVIDIA Control Panel ကို".
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Display ကို"ထိုအခါလျှင်ကြည့်ပါ "အရောင် setting များကိုထိန်းညှိခြင်း desktop ကို" နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအတောက်ပတန်ဖိုးကိုရန် slider ကိုရွှေ့။
standard Windows function ကို
windose ၌သင်တို့ကိုပါဝါအစီအစဉ်ကို configure ခွင့်ပြုမယ့် built-in feature ကိုရှိပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့သည်ရှေးခယျြစရာများထဲတွင်နှင့်အရောင်အဝါဖွဲ့စည်းမှုပုံစံရှိပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲ:
သွားပါ "Start" နှင့်ဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, သငျသညျခကျြခငျြးအောက်ခြေမှ slider ကိုရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအ setting ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပိုပြီးအသေးစိတ်တည်းဖြတ်များအတွက် "ပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ် settings ကို".
အပှေါစစ်ဆင်ရေးနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောတနျဖိုးထားကြ၏။ သငျသညျကို exit တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အပြောင်းအလဲများကိုကယ်ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အခြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သူတို့ကိုအောက်က link ကိုမှာအခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာစားဘို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များ။
Windows7တွင်မျက်နှာပြင်၏အရောင်အဝါပြောင်းခြင်း
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်အရောင်ပြောင်းခြင်း
ယခုငါတို့တောက်ပညှိနှိုင်းမှု၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနားလည်ကြောင်း, ငါ့ laptop ကိုအပေါ်အပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်မှအပေါ်ကိုရွှေ့။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှစ်ခုလူကြိုက်အများဆုံးကိစ္စများမှဖြေရှင်းချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်။
Method ကို 1: function ကိုသော့တွင်
လက်တော့ပ်အများစုမှာပိုင်ရှင်တွေအရောင်တန်ဖိုးကိုချိန်ညှိဖို့ key combination ကိုပါဝငျသညျ။ သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါသည့်အခါတခါတရံဘာမှဖြစ်ပျက်, ဤသက်ဆိုင်တဲ့ tool ကိုရိုးရှင်းစွာ BIOS ကိုသို့မဟုတ်သူသည်သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းများရှိသည်ပါဘူးသောနေ့၌ပိတ်ထားရကြောင်းဖော်ပြသည်။ function ကိုသော့များ၏ပြဿနာနှင့် activation ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အောက်ကလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့နှစ်ဦးကိုဆောင်းပါးများကိုမှဖွင့်ဖို့အကြံပေးခဲ့သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်ရှိသည်။
လက်ပ်တော့အပေါ် F1 ကို-F12 သော့ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ ASUS ကလက်တော့အပေါ်ချွတ်ယွင်း "Fn" key ကို၏အကြောင်းတရားများ
Method ကို 2: ဗီဒီယိုကဒ်ကားမောင်းသူ Upgrade သို့မဟုတ်ပြန်လှိမ့်
လက်ပ်တော့အပေါ်အပြောင်းအလဲများ brightness ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါမအောင်မြင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောဒုတိယဘုံချွတ်ယွင်းဗီဒီယိုဒရိုင်ဘာ၏မမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျ / မှားဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းအဆင့်မြှင့်တင်တဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ပျက်။ အကြှနျုပျတို့သညျကို upgrade ဒါမှမဟုတ်ယခင် software ကိုဗားရှင်းပြန်လှိမ့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုတစ်ဦးကအသေးစိတ်လမ်းညွှန်အောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ NVIDIA ဂရပ်ဖစ်ကားမောင်းသူကိုပြန်လှိမ့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ AMD Radeon ဆော့ဝဲသှေးရောငျကနေတဆင့်ယာဉ်မောင်း Installing
အဆိုပါ Windows operating system 10 ကိုင်ဆောင်သူသငျသညျထိုပြဿနာများ၏ဖျက်သိမ်းရေးအပေါ်ညွှန်ကြားချက် OS ကို၏ဤဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးသူအနေဖြင့်အခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှဖွင့်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: က Windows 10 မှာအရောင်အဝါညှိနှိုင်းမှုပြဿနာများနှင့်အတူပြဿနာ
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ပြဿနာအလုံအလောက်လွယ်ကူသောရှိခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းနေသည်နှင့်တခါတရံတွင်ပင်မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖျော်ဖြေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, အလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းဆောင်းပါး၏အလွန်အစအဦးမှာပါရှိခဲ့သည်မိန့်ခွန်းအရာနှင့် ပတ်သက်. အခြားရွေးချယ်စရာအရောင်အဝါထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မဆိုအခက်အခဲများမရှိဘဲသင်စနစ်တကျယခုရောင်ခြည်အပြောင်းအလဲများကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်နိုင်ခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: เพลง ลกทง ในระบบเสยง อายมเขา แตเจามอาย (အောက်တိုဘာလ 2019).